Dambudziko neTubbles ... er ... Widgets | Martech Zone
Dambudziko Nematambudziko… er… Widgets
Muvhuro, Mbudzi 24, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nhasi ndadya masikati nechikwata chedu kubasa uye tataura kuburikidza newidget matekinoroji. Ini handisi fan of widgets kutaura chokwadi. Ini ndinotenda vanowanzo putsa kuenderera kwemifananidzo ye blog, kusanganisa mamwe emablog, uye anowanzovakwa kuti azviunze ivo pachavo uye kwete webhusaiti.
Kunyangwe iwe uri kuwedzera Widgets or gadget kune yako blog, webhusaiti yako, yako iGoogle peji kana kunyange desktop yako ... majeti anofanirwa kuita kuti zvive nyore kubatanidza pasina kudikanwa kwekuronga. Ingo nyora kodhi kana kurodha pasi widget uye woenda.
Changu chandinofarira chekutarisa Widgets ndeche Mashable, asi ini handizvione ndiri kuzviisa kazhinji. Ini ndinogara ndichitsvaga rubatsiro kune vaverengi vangu - uye ini kazhinji handigoni kuwana imwe. Zvichida ini ndaizoisa mawijeti dai paine injini yekutsvaga inobatsira, asi ruzhinji rwemajeti anotakura mutengi-parutivi uye iyo data yakaunganidzwa haina kumboonekwa neinjini yekutsvaga.
Rimwe dambudziko nemajeti ndeyekuti chidimbu chimwe hachikwane zvese. Widget yakakodzera kubva pamaonero emusiki haisi hazvo iyo yakafanira widget kubva kune mushandisi maonero. Ini ndinoona izvi ndichidzokorora… Ini hangu handikwanise dhizaini widget kuti ienzane nekushandisa uye dhizaini yewebhusaiti yangu. Kuchenesa ine inotevera hombe inotevera semutungamiri muwijeti… ichipa zvimwe zvisina kujairika analytics uye kutevedzera pane mawijeti.
Handina chokwadi chekuti ndakamboona kukosha kwebhizinesi, hazvo! Ini ndinowanzo tenderera ndakananga kusangana kuburikidza nemaAPIs sezvo ini ndichigona kuenzanisa kutaridzika uye kunzwa kwesaiti yangu, wedzera kumwe kushanda, uye pamwe ndotora mukana weimwe yekutsvaga injini kunaka.
For a Software seSevhisheni blogging chikuva seCompendium, kune zvakanakira kune mawadhi, zvakadaro. Sezvo majeti akatakura uye achimhanya kune mutengi uye kwete kuseva, hausi kuisa iyo yakazara system panjodzi kana mumwe munhu akabatanidza boka rekupenga. Zvakare, izvo SEO zvinokanganisa chaizvo zvinoshanduka kuve zvakanakira chishandiso chakasimba kwazvo kubva paKutsvaga Injini Kugonesa. Widgets haizorerutse yako yekutsvaga injini kunaka.
Kana vatengi vedu vachida kuwedzeredza peji ravo, vangangodaro vachikuvadza kwavo kutendeuka (vanhu vachidzvanya kuenda kunhare yekuita inotyaira bhizinesi), saka tinoyambira pamusoro pavo. Isu tinovimba nekubudirira kwevatengi vedu saka isu tinosundira nesimba kuti vaite kuti vateedzere kune epamhepo kushambadzira maitiro
Unoshandisa majeti here? Ndingafarire kunzwa mhando yemabhizinesi mauri kuwana.
Tags: 20122012 Mobile2012 nharembozhadhizaini infographicssimba rekuisa nhamba yekuisanharembozha internetseo kufona kwekuteverasocial media tipswemakemirewordpress login
Sei uchitaura neni?
Mbudzi 26, 2008 na12: 22 PM
Ndinewe Doug. Ini saka ndinoda kufarira mawijeti asi ivo vanogara vachindisiya ndichida zvimwe. Ini ndoda kupinda mukati mawo, tweak iwo, uvaenzanise kune yangu saiti uye ini handimbogona. Saka ini ndinogara ndichienda kune yakaoma-kukodha uye kuvaka ruoko-zvese. Pamwe ini ndinongova mucheki wekugutsikana kwandinowana kuvaka chimwe chinhu ini.
Nov 27, 2008 pa10: 30AM
Ini ndiri zvemukati mukomana uye ndinotarisira mhedzisiro kana kushomeka uko kwenzvimbo sere, kusanganisira yanguwo. Ini ndinoyeuchidzwa kazhinji kazhinji (uye zvinorwadza!) Nezve izvo zvishoma zvinotora kudzora mushanyi. Chaizvoizvo, kana iwe ukaisa chimwe chinhu pane yako saiti zvaive nani kuvepo kunyatso kuvandudza ruzivo rwevashandisi uye / kana kufambisa vanhu kuenda pakutendeuka. Beyond izvo zvinhu zviviri uye iwe unoisa mungozi zvinangwa zvebhizimusi zvesaiti.